Politika momba ny tsiambaratelo - DESIGN FORM TANANA → Architecture Small Urban ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Politika momba ny tsiambaratelo sy mofomamy ("Politika momba ny tsiambaratelo")
Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia fanehoana fikarakarana ny zon'ny mpitsidika amin'ny tranokala ary mampiasa serivisy atolotra ao anatin'izany. Tanteraka ihany koa ny adidy fampahalalana eo ambany Art. 13 ny lalàna mifehy ny Parlemanta Eropeana sy ny Filankevitra (EU) No. 2016/679 tamin'ny 27 aprily 2016 momba ny fiarovana ny olona momba ny famoahana ny angon-drakitra manokana sy ny hetsika malalaka amin'ny angon-drakitra toy izany ary ny famerenana ny Direction 95/46 / EC (fitsipika ankapobeny momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana) (Journal of Laws UE L119 tamin'ny 4.05.2016 Mey 1, p. XNUMX) (aorian'izany dia antsoina hoe GDPR).
Ny tompon'ny tranokala dia mifantoka manokana amin'ny fanajana ny fiainana manokan'ny mpampiasa tranonkala. Voaro miaro sy voaro tsara ny angon-drakitra ao amin'ny tranokala raha tsy nahazo alalana tsy nahazo alàlana. Ny politika momba ny tsiambaratelo dia natao ho an'ireo rehetra liana. Misokatra ny tranokala.
Ny tompon'ilay tranokala dia miantoka fa ny tanjon'izy ireo dia ny hanomezana olona ny fiarovana ny tsiambaratelo amin'ny olona ambaratonga farafahakeliny mifanaraka amin'ny takian'ny lalàna ampiharina, indrindra ny fanomezana ny GDPR sy ny lalàna ny 18 Jolay 2002 momba ny fanomezana tolotra elektronika.
Ny tompon'ilay tranonkala dia mety manangona angon-drakitra manokana sy hafa. Ny fanangonana ireo angon-drakitra dia atao, miankina amin'ny toetrany - mandeha ho azy na vokatry ny fihetsiky ny mpitsidika ny tranokala.
Ny olona tsirairay mampiasa ny tranokala amin'ny fomba rehetra dia manaiky ny fitsipi-dàlana rehetra ao anatin'ity Politika miafina ity. Ny tompon'ny tranokala dia manana zo hanao fanovana amin'ity tahirin-kevitra ity.
Fampahalalana ankapobeny, mofomamy
Ny tompona sy mpandraharaha ny tranokala dia Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sy ny birao fisoratana anarana ao Warsaw, adiresy: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, dia niditra tao amin'ny lisitr'ireo mpandraharaha an'ny lisansa Fitsarana nasionaly notazonin'ny Fitsaràna Distrika tany Warsaw, Fizarana fizarana ny lisitr'ireo fitsaram-pirenena, araka ny laharan'ny KRS: 0000604168, laharana NIP: 5213723972, laharana REGON: 363798130. mifanaraka amin'ny Ny fitsipiky ny GDPR, ny tompona tranonkala ihany koa dia ny Data Data Administrator an'ny mpampiasa tranonkala ("Administrator").
Amin'ny maha-hetsika atao, ny Administrator dia mampiasa mofomamy amin'ny fomba iray ahafahany mijery sy mamakafaka ny fifamoivoizana amin'ny pejin'ny tranokala, ary manao hetsika famerenana fanamarihana, na izany aza, amin'ny ampahany amin'ireto hetsika ireto, ny Administrator dia tsy manao fizarana angon-drakitra manokana ao amin'ny dikan'ny GDPR.
Manangona ny fampahalalana momba ireo mpampiasa tranonkala sy ny fihetsik'izy ireo amin'ny manaraka ireto ny tranokala:
manangona otomatis ny vaovao izay misy amin'ny mofomamy.
tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra nampidirin'ny mpampiasa tranonkala an-tsitrapo tamin'ny endrika hita tao amin'ny pejy tranonkala.
amin'ny fanangonana lozisialy an-tserasera amin'ny alàlan'ny mpampiantrano fampiantranoana.
Ny rakitra Cookie (antsoina hoe "cookies") dia angon-drakitra IT, indrindra ny raki-daza, izay voatahiry ao amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa ny vohikala ary natao hampiasana ny pejin-tranonkala. Matetika ny Cookies dia misy ny anaran'ilay tranonkala nolalovan'izy ireo, ny fotoana fitahirizana amin'ny fitaovana farany ary ny isa tsy manam-paharoa.
Mandritra ny fitsidihana ny tranokala, ny angon'ireo mpampiasa tranonkala dia mety angonina ho azy, mifandraika amin'ny fitsidihan'ny mpampiasa iray ho an'ny tranonkala, anisan'izany, miaraka amin'ny hafa, IP adiresy, karazana navigateur web, anarana domain, isan'ny fijerena pejy, karazana rafitra fandidiana, fitsidihana, efijery, fitambaran'ny loko, adiresy tranonkala izay nidirana ny tranokala, fotoana fampiasana ny tranonkala. Ireo angon-drakitra ireo dia tsy angon-drakitra manokana, ary tsy avelan'izy ireo mamantatra ny olona mampiasa ilay tranonkala.
Mety misy rohy mankany amin'ny tranokala hafa ao anatin'ny tranokala. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny fiainana manokana amin'ireo tranokala ireo ny tompon'ilay tranokala. Mandritra izany fotoana izany, ny tompon'ny tranokala dia manentana ny mpampiasa ny mpamaky hamaky ny politikam-pon'ny fiainana manokana ao amin'ireo tranokala ireo. Ity politika Politika ity dia tsy mihatra amin'ny tranokala hafa.
Ny orinasa izay mametraka mofomamy amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa ny tranonkala ary mahazo fidirana amin'izy ireo dia tompon'ny tranonkala.
Ny cookies dia mahazatra amin'ny:
fanitsiana ny votoatin'ny pejin-tranonkala ho an'ny safidin'ny mpampiasa tranonkala ary manara-maso ny fampiasana tranonkala; indrindra indrindra, ireo rakitra ireo dia ahafahana manaiky ny fitaovan'ny mpampiasa ny tranonkala sy mampiseho tsara ny tranokala, mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay,
mamorona statistika manampy amin'ny fahazoana ny fomba fampiasan'ny mpampiasa tranonkala tranonkala, izay ahafahana manatsara ny firafitra sy ny atiny.
mitazona ny foto-kevitry ny mpampiasa ny tranonkala (aorian'ny fandidiana fidirana), isaorana izay tsy voatery nidirany intsony ny fidirana sy ny tenimiafiny amin'ny isaky ny lohatenin'ny tranokala.
Mampiasa ireto cookies manaraka ireto ireto:
Cookies "ilaina", manome alalana ny fampiasana serivisy hita ao amin'ny tranokala, e.g. cookies cookies
mofomamy nampiasaina hiantohana ny filaminana, ohatra.
Mofomamy «Performance», zatra ahazoana vaovao momba ny fampiasana ny pejin-tranonkala ataon'ireo mpampiasa tranonkala,
Cookie "dokambarotra", manome alalana ireo mpampiasa ny vohikala manome votoatin'ny dokam-barotra mifanaraka amin'ny tombontsoany,
Cookies "Functional", ahafahana "mahatsiaro" ny fisafidianana nofidin'ny mpampiasa tranonkala ary nampifanaraka ilay tranokala tamin'ny mpampiasa tranonkala, ohatra ny momba ilay fiteny voafantina.
Mampiasa karazana mofomamy roa lehibe ny tranokala: mofomamy session ary cookies maharitra. Ny cookies session dia rakitra vonjimaika tazonina ao amin'ny fitaovana farany mandra-pialany ny tranokala, mivoaka avy amin'ny mpampiasa ny tranonkala na mamadika ny rindrambaiko (tranonkala web). Ny mofomamy maharitra maharitra dia voatahiry ao amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa ny tranonkala mandritra ny fotoana voafaritra ao amin'ny mari-pahaizana mofomamy na mandra-pahalan'ny mpampiasa tranonkala azy.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny rindrambaiko ampiasaina amin'ny tranokala fitadiavana tranonkala dia mamela ny cookies hahazoana tehirizina amin'ny fitaovana faran'ny mpampiasa ny tranonkala amin'ny alàlan'ny default. Ny mpampiasa tranokala dia manana safidy amin'ny fanovana ny fikirana cookie amin'ny fotoana rehetra tiany. Ireo fanovana ireo dia azo ovaina amin'ny safidy amin'ny navigateur web (rindrambaiko), ankoatry ny hafa amin'ny fomba iray manakana ny fikarakarana mofomamy tsy misy mofomamy na manery ny mpampiasa tranokala hampahafantarina isaky ny apetraky ny cookies eo amin'ny fitaovany. Ny fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ny mety sy ny fomba fitantanana ny mofomamy dia azo alaina ao amin'ny fisavana ny tranonkala navigateur.
Ny famerana amin'ny fampiasana cookies dia mety hisy fiantraikany amin'ny sasany amin'ireo fiasa miasa ao amin'ny pejy amin'ny tranokala.
Cookies napetraka amin'ny fitaovana entin'ny mpampiasa tranokala dia mety ampiasain'ny mpanao dokambarotra sy mpiara-miasa miara-miasa amin'ny tompon'ny tranokala.
Fananana angon-drakitra manokana, fampahalalana momba ny endrika
Ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa tranonkala dia azo alain'ny Administrator:
raha manaiky azy io amin'ny endrika naseho ao amin'ny tranokala ny mpampiasa ny tranonkala, mba handraisany andraikitra izay ifandraisan'ireo endriny ireo (Andininy 6 (1) (a) an'ny GDPR) na
rehefa ilaina ny fanodinana ho an'ny fanatanterahana ny fifanarahana iray izay mpampiasa ny tranonkala dia fety (Andininy 6 (XNUMX) (b) ny GDPR), raha ny tranonkala dia mamela ny fanatanterahana ny fifanarahana eo amin'ny Administrator sy ny mpampiasa ny tranonkala.
Amin'ny maha-tranokala anao, ny angon-drakitra manokana dia ataon'ireo mpampiasa tranonkala ihany. Ny mpandrindra dia mandefa ny angon-drakitra manokana momba ny mpampiasa tranonkala raha tsy ilaina amin'ny tanjona voalahatra ao amin'ny teboka 1 lit. a sy b etsy ambony sy ho an'ny fotoana ilaina hanatanterahana ireo tanjona ireo, na mandra-pialan'ny mpampiasa ny faneken'izy ireo. Ny tsy fanolorana angon-drakitra ataon'ny mpampiasa ny tranonkala dia mety, amin'ny toe-javatra sasany, dia miteraka ny tsy fahatongavana hahatratra ny tanjona izay ilaina ny fanomezana data.
Ity angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa tranonkala ity dia mety angonina ho ampahany amin'ny endrika napetraka ao amin'ny tranokala na hanaovana fanatontosana fifanarahana izay azo tsoahana ho ampahany amin'ny tranokala: anarana, solon'anarana, adiresy, adiresy mailaka, laharana an-tariby, fidirana anaty, tenimiafina.
Ireo angon-drakitra ao amin'ireo endrika, atolotry ny mpampiasa ny tranonkala dia azo afindran'ny Administrator ho an'ny antoko fahatelo miara-miasa amin'ny Administratera mifandray amin'ny fampiharana ny tanjona napetraka ao amin'ny teboka 1 lit. a sy b ambony.
Ny angon-drakitra omena ireo endrika ao amin'ny tranokala dia novolavolaina ho an'ny tanjona nateraky ny fiasa amina endrika manokana, ankoatr'izay, mety ho ampiasain'ny Administrator ihany koa izy ireo ho an'ny antontan'isa sy statistika. Ny fanekena ny foto-kevitra data dia aseho amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny varavarankely mety amin'ilay endrika.
Ny mpampiasa tranokala, raha toa ka manana fiasa tahaka izany ny tranokala, amin'ny alàlan'ny fisavana ny varavarankely mifanentana amin'ny endrika fisoratana anarana, dia mety handà na hanaiky handray vaovao ara-barotra amin'ny alàlan'ny fifandraisana elektronika, mifanaraka amin'ny Lalànan'ny 18 Jolay 2002 amin'ny fanomezana ny serivisy elektronika ( Journal of Laws of 2002, No. 144, laharana 1024, raha nasiam-panovana). Raha nanaiky ny fahazoana mombamomba ny varotra amin'ny alàlan'ny fifandraisan-davitra elektronika ny mpampiasa tranonkala, dia manan-jo hanaisotra izany fanekena izany amin'ny fotoana rehetra izy. Ny fampiharana ny zo hisintona ny fahazoan-dàlana hahazoana fandraisana fanazavana ara-barotra dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fandefasana fangatahana amin'ny alàlan'ny mailaka mankany amin'ny adiresin'ny tompon'ny tranokala, ao anatin'izany ny anarana sy ny anaran'izay mpampiasa ny tranonkala.
Ny angon-drakitra omena amin'ny endrika dia azo afindra any amin'ireo orinasa izay manolotra serivisy ara-teknika sasany - indrindra, izany dia mihatra amin'ny famindrana ny mombamomba ny tompon'ny domaine voasoratra anarana ho an'ireo vondrona mpizara amin'ny Internet (indrindra ao amin'ny Scientifica sy Academic Computer Network jbr - NASK), serivisy fandoavana na serivisy hafa. izay ifandraisan'ny Administrator amin'ity lafiny ity.
Ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa tranonkala dia voatahiry ao anaty tahiry marika izay anaovana ny fepetra ara-teknika sy fandaminana mba hiantohana ny fiarovana ny angon-droa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fitsipika mifandraika.
Mba hisorohana ny fisoratana anarana indray ny olona izay nampitsahatra ny fandraisany anjara amin'ny tranokala noho ny fampiasana tsy nahazo alàlana ny serivisy ao amin'ny tranonkala, ny Administrator dia mety handà ny hanaisotra ny angon-drakitra manokana ilaina hanakanana ny mety hisoratra anarana indray. Ny fototry ny lalàna ho an'ny fandavana dia Art. 19 fehintsoratra 2 isa 3 mifandraika amin'i Art. 21 sec. 1 ao amin'ny lalàna 18 Jolay 2002 momba ny fanomezana serivisy elektronika (izany hoe ny 15 Oktobra 2013, Journal of Laws of 2013, laharana 1422). Ny fandavan'ny Administrator hamafa ny data momba ny mpampiasa ny tranonkala dia mety hitranga amin'ny tranga hafa nomen'ny lalàna.
Amin'ny tranga nomen'ny lalàna, ny Administrator dia mety manambara ny sasany ny angon-drakitr'ireo mpampiasa tranonkala ho an'ny antoko fahatelo ho an'ny anton-javatra mifandraika amin'ny fiarovana ny zon'ny antoko fahatelo.
Ny Administrator dia manan-jo handefa ny mpampiasa rehetra amin'ny mailaka amin'ny tranokala misy fampandrenesana momba ny fiovana lehibe ao amin'ny tranokala ary momba ny fanovana amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity. Ny mpandrindra dia mety mandefa taratasy elektronika ara-barotra, indrindra ireo dokam-barotra sy fampahalalana momba ny varotra, raha toa ka nanaiky izany ny mpampiasa tranonkala. Ny doka sy ny fampahalalana ara-barotra hafa dia azo afindrafindra amin'ny taratasy miditra sy mivoaka avy ao amin'ny kaonty rafitra.
Zon'ny mpampiasa serivisy momba ny angon-drakitra manokana arakaraka ny Art. 15 - 22 GDPR, manana ny zony manaraka ireto ny mpampiasa tranonkala tsirairay:
Zo ny miditra data (Andininy 15 amin'ny GDPR)Ny lohahevitra momba ny angon-drakitra dia azony alaina amin'ny fanamafisan'ny Administrator raha misy angona manokana momba azy, ary raha izany, fidirana amin'izy ireo. Araka ny And. Ny mpandrindra dia hanome ny foto-kevitra momba ny angon-drakitra miaraka amina kopian'ireo angon-drakitra manokana izay harahina.
Zo ny manamboatra data (Andininy 16 ny GDPR)Ny lohahevitra momba ny angon-drakitra dia manan-jo hangataka amin'ny Administrator hanitsy avy hatrany ny data tsy marina momba azy.
Zo ny manala data ("mety adino") (Andininy faha-17 amin'ny GDPR)Ny loha-angon-drakitra dia manan-jo hangataka ny Mpitantana mba hamafa avy hatrany ny antontan-taratasiny manokana, ary ny Administrator dia voatery hamafa ny angon-drakitra manokana raha tsy misy fanemorana raha misy ny iray amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
Tsy ilaina intsony ny angon-drakitra manokana momba ny antony nanangonany azy na nanodinana tamin'ny fomba hafa;
Ny lohahevitra data dia nanaisotra ny fanekena ifototry ny fanodinana
ny anton-kevitra manondro ny fizarana arakaraka ny Art. 21 sec. 1 manohitra ny fanodinana ary tsy misy fepetra manara-penitra amin'ny fanodinana
Zo ny famerana ny fanodinana (Andininy faha-18 ny GDPR)Ny loha-angon-drakitra dia manan-jo hangataka ny mpandrindra hametra ny fanodinana amin'ireto tranga ireto:
Rehefa tsy marina ny angona - ara-potoana hanitsiana azy
Ny lohahevitry ny angona dia manohitra ny fanodinana mifanaraka amin'ny Art. 21 seg. 1 manohitra ny fanodinana - mandra-pahafantatra raha ny antony ara-dalàna an'ny Administrator no mandresy ny antony fanoherana ny foto-kevitra.
Tsy fanarahan-dalàna ny fanodinana ary ny foto-kevitra dia manohitra ny famafana ny angon-drakitra manokana ary mangataka ny famerana ny fampiasana azy ireo.
5. Ny zon'ny fidirana data (and. 20 GDPR)Ny loha-angon-drakitra dia manan-jo handray, amin'ny endrika manana rafi-pandrafitra sy mahazatra, vakiana, madiodio manokana momba azy, izay nomeny ny Administrator, ary manana zo handefa izany data manokana izany amin'ny mpitantana hafa nefa tsy misy sakana avy amin'ny Administrator izay nomena azy ireo angon-drakitra manokana. Ny loha-angon-drakitra dia manan-jo hangataka ny angon-drakitra manokana alefan'ny Administrator mivantana amin'ny mpitantana hafa, raha azo atao ara-teknika. Ny lalàna voatonona amin'ity fizarana ity dia mety tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny zon'ny hafa sy ny fahafahan'ny hafa.
6. Zo manao zavatra (Art. 21 GDPR)Raha ny angon-drakitra manokana dia arahana amin'ny tanjona marketing mivantana, ny lohahevitra momba ny angon-drakitra dia manan-jo hanohitra amin'ny fotoana rehetra amin'ny fikarakarana ny angon-drakitra manokana ho an'ny tanjon'ny marketing toy izany, ao anatin'izany ny profiling, raha toa ka misy ifandraisany amin'ny marketing mivantana toy izany ny fanodinana. .
Ny fampiharana ny zon'ny mpampiasa mpampiasa etsy ambony dia mety hitranga manohitra ny fandoavam-bola raha toa ka misy lalàna mifandraika amin'izany.
Raha misy ny fanitsakitsahana ny zon'ny ambony etsy ambony na ny mpampiasa ilay vohikala mahita fa ny angon-drakiny manokana dia tantanan'ny Administrator mifanohitra amin'ny lalàna ampiharina, ny mpampiasa tranonkala dia manan-jo handefa fitarainana amin'ny manam-pahefana mpanara-maso.
Mifanaraka amin'ny fanaon'ny ankamaroan'ny tranonkala, ny tranokalan'ny tranokala dia mitahiry ny fanontaniana manontany ny mpizara tranonkala (fampahalalana momba ny toetran'ny mpampiasa tranonkala dia voatonitra ao anaty sosona mpizara). Ny loharanom-paritra dia notadiavin'ny adiresy URL. Toy izao manaraka izao ny lisitry ny fampahalalana notehirizina tao anaty kaonty web server:
adiresy IP an'ny solosaina izay nivoahan'ny fanadihadiana,
anaran'ny tobin'ny mpanjifa - famantarana ny alàlan'ny protocol http, raha azo atao,
Anaran'ny mpampiasa ny tranonkala nomena tao amin'ny fizotran'ny fanomezan-dàlana (fidirana),
ny fotoana fanadihadihana,
http code code,
ny isan'ireo baita nalefan'ilay mpizara,
Adiresy URL ny pejy notsidihin'ny mpampiasa ny tranonkala (rohy referrer) - raha niditra tamin'ny alàlan'ny rohy ny tranonkala.
fampahalalana momba ny tranonkala mpampiasa Internet,
fampahalalana momba ny lesoka nitranga nandritra ny fanatanterahana ny varotra http.
Ny angon-drakitra etsy ambony dia tsy mifandray amina olona manokana mijery ny pejy hita ao amin'ny tranokala. Mba hahazoana antoka ny kalitao avo indrindra amin'ny tranokala, ny mpikarakara tranonkala dia manadihady indraindray ireo rakitra hazo mba hamaritana hoe inona ireo pejy ao anaty tranokala no notsidihina matetika, izay ampiasain'ny mpizara tranonkala, na misy ny fahadisoana eo amin'ny tranokala.
Ny vatan'ny mpanangona dia voatahiry mandritra ny fotoana tsy voafetra ho fitaovana fanampiana ho an'ny fitantanana tsara ny tranokala. Ny fampahalalana ao anatiny dia tsy hambara amina orinasa hafa ankoatry ny mpandraharaha na ny sampana mifandray amin'ilay mpandraharaha, na renivohitra na fifanarahana. Miorina amin'ny fampahalalana ao anatin'ireo rakitra ireo, ny statistika dia azo zahana manampy amin'ny fitantanana ny tranokala. Ny famintinana izay misy antontan'isa toy izany dia tsy ahitana endrika manondro ireo mpitsidika tranonkala.